Tilmaamid Buugga: GASO, GANUUN Iyo Gasiin. W/Q: Xasan Cabdulle Calasow "Shiribmaal"
Monday November 05, 2018 - 11:05:49 in Wararka by Mogadishu Times
Buugga GASO, GANUUN iyo GASIIN ee uu qoray Borofaysar Cali Jimcaale Axmed,waa buug aaney fahmi karin in badan oo wax aqrisa. Waa buug falsafadeed aad is leedahay waxa loogu talogalay jiilka imaan doona qarniyada soo socda. Buugga qofku markuu arko qa
Buugga GASO, GANUUN iyo GASIIN ee uu qoray Borofaysar Cali Jimcaale Axmed,waa buug aaney fahmi karin in badan oo wax aqrisa. Waa buug falsafadeed aad is leedahay waxa loogu talogalay jiilka imaan doona qarniyada soo socda. Buugga qofku markuu arko qacda hore ee uu indhaha ka qaado, ayuu ku wayddiinayaa, waa buug ka hadlaya dhaqanka heermiyiga. Waxay ku wayddiinayaan, waxa ay kusoo kordhin karto, qarniga lagu jiro ee casriga ah, adduunyaduna noqotay, hal Guri dhediis, in laga hadloGASO, GANUUN iyo GASIIN?Iyo wax maantoo laga gudbay, ama laga ilbaxay. Halka buuggu yahay mid dhigaalkiisu u qalmo inay dhugtaan jiil aan maanta ifka joogin. Halkaas waxa ka jira is waydaarasho iyo mooggaansho, u dhaxeysa buugga dhigaalkiisa iyo qofka doonaya inuu aqristo ama iibsado.
Inta aynaan u gelin falaqeynta buugga iyo ka sheekantiisa. Aan mugga hore baranno waxa ay yihiin GASO, GANUUN iyo GASIIN. Afkeennu waa af Hodan ka ah dhinac walba. Soomaaliduna weligeedba mas’aladi la bixin waayo, Qur’aanka iyo Sunnada SuubbanaheennaMuxammad (SCW) ayay ula noqon jireen. Halka erayga Afka kusoo biira ama la doonayo in la iftiimiyana loola noqon jiray Suugaanta guunkaa ee abya oday kasoo gaarka ah. Haddaba anigoo taas ka duulaya ayaan rabaa inaan seddaxda eray ee Buugga loogu wanqalay inaan ka baaro suugaata Soomaaliyeed. Si aan u ogaanno kalximaha ay geliyeen halabuurrada suugaanta jaadadkeeda kala geddisan curiya.
GASO, MOORO, XERO,waa halka lagu hooyo gaabbaadna u ah Gaashada Xolaad. Waxa kale oo ay noqon kartaa, meel kasta oo wareegsan, dhinacyadana aan loo dhaafi karin. Mar waa moorada aan soo tilmaamay ee xoolaha u gaarka ah, midna waa mid guud, sida; Dhulka aynu ku noolnahay ee carra-edeg, adduunka oo idil. Haddaan ku billaabo gabay aan anigu tiriyay goor sii horreysay;
GASOiyo haddii geel lahaa, Geesi dhaqahaayo
GASOIdaad ma loo geelaa?g
Laashin:Cabdi dilcif (AUN).
GASOisugu geey rabaan.
Laashin: Xasan Abubakar Calasow "Abaaji”
GANUUN, Buray, Doobtay, Haruub, Gaawe, Arneyl, intaas oo magac ayaa loo yaqaan iyo kuwa kale oo badan. Si guud waxa uu ku caanyahay Weelka lagu liso xoolaha gaar ahaan GEELA. Si kale haddii loo dhigana wuxuu noqdaa wax kasta ee wax lagu daboolo, ama lagu aamburo, sida: Dhiisha, Haanta IWM. Ganuun Suugaanta Soomaaliyeed inbadan-baa lagu sheegay, balse, waan soo koobayaa anigoo amminka ilaalinaya.Sheekh Axmed Abiikar Xasan "Sheekh Axmed Wacdiyow” (AUN).Wuxuu masafo ku yiri; qarnigii 18aad.
GANUUNYAdhiilna wax loogu gayhayn
Haddaan ka tilmaansanno, gabay uu tiriyay; Abwaan la yiraa:Gacal Dhegoole(AUN). asigoo ka gabyaya Gumaystihii Talyaaniga billowgi qarnihii 19-aad wuxuu yiri:
GANUUNmeerto mow culan karaa, Ninman lahayn geela
MayadaaGANUUNdaarla li’, Guri wax geyhaaya
Laashin :Cabdi Nuur Xasan Cali (Cabdi Nuur Waddani) wuxuu ku tilmaamey sidaan:
GANUUNculan wixii aan Cabdoow, culus ku maalaba
GANUUNdhaaya wada caba.
Laashin:Imaam Cumar Imaam Caamir (AUN).
Laashin:Xuseen Sheekh Axmed Kadare(AUN).
GANUUNbiyaa ganuun kaloo
GASIIN waa wax kasta ee dhuunta mara, sida: Cunno, dheef, dhuuni, Hunguri, Raashin, Iyo iidaanki lagu macaaneyn lahaa. Sidaa darteed waxa la yiraahdaa:GASIIN iyo GOOSAAR. "Ollog iyo iidaan”qoraagu se si isku duub ah ayuu gasiinka u tilmaansaday. Haddaan ku billaabo mahmaah caan ah waxay leedahay:
Abwaankii caanka ahaay eeSalaan Carrabeey (AUN). Wuxuu ku gabyay:
GacatiyoGASIINlaga baxshiyo, guriga hawshiisa
Abwaan:Cabdidhuux Yuusufwuxuu tilmaamay asigoo ka maansoonaya dhaqanka iyo gobannimada dadka Soomaaliyeed wuxuu yiri:
AdigoonGASIINwadan socdaal, Meel fog ugu gooshka
Laashin:Hassan Abukar Alasow "Abaaji”wuxuu ku tilmaamay GASIINKA sidaan:
Abwaan:Cabdiraxiin Hilowle Galayrisna wuxuu ku tilmaamay GASIINKA sidaan;
GASIINkaad cunaysiyo mar waa, Gaaja tira wayne
Abwaan:Xasan Daahir "Weersame”asna wuxuu yiri:
Saddex goor haddii aadGASIIN, gawska la helayso,
Abwaanad: Hodan Sh. Cumar,waxay tiri:
HooyadaGASIINay cuntiyo, Gogolba aan haysan
sawGASIINwaxay layd ma cunin, Gaalka ubadkiisu?
Waxba yaanGASIINiyo la siin, Gogol firaashkeede
Ee uuGASIINKIIka jaray, guri xannaanayta
GASIINiyo waxay raadisaa, shoobinkii go’aye
Abwaan:Maxamed Cali Kaariye (AUN). Wuxuu yiri:
GASIINKAma kari taqaan
Abwaan:Xasan Ganeeywuxuu ku tilmaamay heestii caanka ahayd ee Gacal iyo Gayaan ee wada qaadeen Axmed Cali Cigaal iyo Khadra Daahir Cige sidaan:
Abwaan:Xasan Cabdi Abtidoon (Kunciil Qorrax)asna wuxuu ku tilmaamay sida tan:
GASIINkii ka qadiyoow
Abwaanad:Farax Sheekh Cabdirisaaq (Zedra Sheikh)waxay ku tilmaantay sida tan;
Suugaanta laga tiriyey ama ay ku jiraan seddaxdaan eray ee qoraagu buugga ugu wanqalay;GASO, GANUUN iyo GASIIN,waa ay tira badanyihiin. Halkaasna waxa nooga cad afaqoolnimada Borofaysar Cali Jimcaale Axmed. Seddexdaa eray ee magaciisu ka kooban yahay dhiganaha ayaa dhexdiisuna ka kooban tahay, waa sheekho dedan oo haddana daahfuran, suugaan ku habboonna lagu iidaamay. Ma doonayo inaan buugga dhexdiisa idiinka ka sheekeeyo. Balse, macaanida ku jirta sheekada ayaa kugu qasbeysa in qaybiba qeyb kuu dhiibto. Mar-mar ayuu qoraagu dood isla gelayaa, dooddaas oo dhex maraysa, maskaxda iyo maanka. Maskaxdu mar walba waa oggol diiddan, halka maanku yahay mid oggol walaxda maskaxdu u soo bandhigto, haddana danbaa ka dhaxeysa e, waa is fahmayaan.
Buugga inuu ka hadlaayo adduunka oo idil, qoraaguna yahay aqoonyahan gaamuray, waxa kuu caddeynaya luuq aan ku jirin ma jirto Dhiganaha dhexdiisa. Waxa ku hilan qisooyin maandhis ah oo uu qoraagu kasoo guuriyay waddamada adduunka. Sidaa aawgeed, GASO, waxay u taagan tahay moorada dadkoo idil ku noolyahay "Adduunka”. GANUUN, wuxuu u taagan yahay agabka kala geddisan ee yaalla isla Gasada uu qoraagu tilmaamay. Halka GASIIN, ka warramayo dhuuniga lagama maarmaanka u ah, Gasada iyo Ganuunka sare ee ah "Adduunka idilkiis. Haddaba biya dhaca iyo muhiimmadda dhiganuhu waa in dunida lagu wada noolaado iyadoon lays riix-riixeyn, laysuna awood sheeganeyn. Dhanka kale wuxuu si mug iyo miisaan leh uga hadlayaa Dhiganuhu, "Caddaaladda” oo ah tiirka koobaad ee nooluhu ku baraaro.
W/D: Xasan Cabdulle Calasow "Shiribmaal”